CO2 laser ukusika, nokukrola kumatshini - China Dongguan Glorystar Laser
Product Feature CO2 laser, nokukrola umatshini ukusika series isebenzisa advanced technology ulawulo DSP yamazwe ngamazwe, ukuba isantya esiphezulu, ukusika ukuchaneka aphezulu kunye nozinzo ophezulu, umgangatho kunye ixabiso ratio iphezulu kakhulu. Inkqubo ephambili unako umthetho yi U-disk ngaphandle uqhagamshelo PC. It has nemisebenzi ahlabayo imitative, umbala wokwahlula ukusika, non-ukuyeka ukuzilimaza kanye amandla, njl Mechanical Design Lo matshini manqaku enzelwe zokwakha ngoomatshini ngqo kwaye ixhobisa okuqinileyo ...
CO2 laser, nokukrola umatshini ukusika series isebenzisa advanced technology ulawulo DSP yamazwe ngamazwe, ukuba isantya esiphezulu, ukusika ukuchaneka aphezulu kunye nozinzo ophezulu, umgangatho kunye nomlinganiselo ixabiso eliphezulu kakhulu. Inkqubo ephambili unako umthetho yi U-disk ngaphandle uqhagamshelo PC. It has nemisebenzi ahlabayo imitative, umbala wokwahlula ukusika, non-ukuyeka ukuzilimaza kanye amandla, njl
Lo matshini manqaku enzelwe zokwakha ngoomatshini ngqo kwaye ixhobisa okuqinileyo kwaye bezinzile isakhelo phandle. It uwenza ngesantya esiphezulu sikhokelo engaphandle kaloliwe, ngaphandle umchankcatho ngeemoto umqhubi ukuphucula ukuchaneka transmissibility ngoomatshini.
Ukwamkela lens ngaphandle nezibuko kwindlela enombala ukuqinisekisa ubomi elide laser ityhubhu kunye kahle eliphezulu ahlabayo.
Ukuchwela, iphepha, ngethwathwa, ilaphu, iglasi eziphilayo, intlaka, acrylic, woolens, iplastiki, irabha,
yodongwe, ngumkhenkce, jade, bamboo kunye nezinye izinto non-metal.
mfanekiso Speed 0-64m / m
Phinda Ukuchaneka ± 0.05mm
Power kukonke oQhelekileyo oSetyenziswa ≤1250W
Ubushushu operating 0 ~ 45ºC
Format Amacebo ezixhaswayo PLT, AI, JPG, PNG, TIF, PCX, TAG,
Previous: Station Laser Welding Machine Single
Okulandelayo: Ifayibha laser Umatshini lokumakishela
Metal ngentlabo Machine
Metal Laser ngentlabo Machine
Oluhambayo Kwaye Batshintshiselane Table Laser Cutting Machine